Maitiro ekuvanza mafoto pane iyo iPhone, iPad kana iPod touch | IPhone nhau
Imwe yesarudzo yatinayo pane iOS uye paMac ndeyekuvanza mafoto kubva kuarubhamu. Chero pikicha inogona kuvanzwa mu gallery uye kunyange kubvira kusvika kweIOS 14 iyo yakavanzika albham iyo yakagadzirirwa kuchengetedza aya mafoto inogona kutomiswa kuitira kuti mapikicha aya anyatsovanzwa. Shanduro dzapfuura dzeIOS dzinotibvumidza kuviga mapikicha asi iwo anoonekwa mune gallery mukati meakavanzwa Album, ine iOS 14 vhezheni yeanoshanda system iyi foto gallery inogona kunyatso "kubviswa pakuona" pane kubviswa.
Asi isu tinoenda muzvikamu. Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuviga iwo mafoto kana mavhidhiyo atinoda uye nekuda kweizvi isu tinofanirwa kutevedzera nhanho idzi:
Isu tinovhura iyo application application uye tinosarudza iwo mafoto atinoda kuvanza
Iye zvino tinofanirwa kubaya pane bhatani rekugovana uye tsvaga sarudzo «Viga»
Isu tinosimbisa kuti tinoda kuviga iyo pikicha kana vhidhiyo uye ndizvozvo
Iye zvino tava kuona aya mapikicha kunze kwemifananidzo gallery mukati me "Chakavanzika album" inoonekwa pazasi pemapikicha emifananidzo. Izvi pazasi mu «Zvimwe zvinhu». Uye zvino tichaita iyi dambarefu nyowani iyo inogadzirwa otomatiki inonyangarika zvachose. Kuti tiite izvi tinofanirwa kuenda kuZvirongwa zveiyo iPhone, iPad kana iPod Kubata uye uteedzere nhanho idzi:
Dzvanya pane iyo Mapikicha sarudzo mune Zvirongwa
Pazasi tinoona «Yakavigwa albha»
Isu tinoremadza toenda
Nechiito ichi zvatakakwanisa kuita kubvisa dambarefu rakavanzika mumenu uye nekudaro hatichazoona mafoto aripo. Wese munhu akasununguka kushandisa ichi chidiki diki kunyangwe ivo vachida, asi usazvirege zvive zvezvinhu zvakaipa eh! 😉
Kana iwe uchida kuona iyo albam zvakare, ingo tarisa iwo marongero zvakare uye kuti iwo mapikicha aonekwe zvakare, ingo tinya pikicha mukati meakavanzika album uyezve shandisa iro rekugovana bhatani (mativi nemuseve) ku nguva ino tinya «Ratidza»
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuvanza mafoto pane yako iPhone, iPad kana iPod touch
Marcelo meneces akadaro
Enda bullshit. Kana mupinzvisi achiziva mashandisiro eakavanzika album nekuenda kuzvirongwa, ipapo anozokwanisa kuwana iyo "yakavanzwa" mifananidzo.
Pindura Marcelo Meneces
AirTags uye zvimwe zvakawanda muna 2021 kuApple